किन बग्छ नाकबाट रगत ?::Online News Portal from State No. 4
किन बग्छ नाकबाट रगत ?
नाकबाट रगत बग्छ, बेलाबखत । यस्तो समस्या हुनु सामान्य हो । नाकमा थोरै ठेस पुग्दा वा अरु कारणले पनि नाकबाट रगत बग्छ । धेरै गर्मी भएमा नाकबाट रगत बग्छ । ज्वरो आएमा रगत बग्छ । यसरी बग्ने रगत आफै विसेक पनि हुन्छ । अर्थात् रगत बग्न रोकिन्छ । तर, लगातार नाकबाट रगत बगिरह्यो भने त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ । १० मिनेट भित्रमा रगत रोकिएमा चिकित्सकका पनि जानु पर्दैन । तथापी, नाकबाट रगत बगेको २० मिनेटसम्म पनि रगत बग्न कम नभएमा, टाउकाको चोटपछि नाकबाट रगत बगेमा वा नाक भाँच्चिएमा भने तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । किनकी चोटपटकबाहेक उच्च रक्तचापको समस्या, रगत सम्बन्धी बिकार, नाक वा साइनसको ट्यूमर भएमा पनि नाकबाट रगत बग्ने गर्छ । त्यस्तै, रगत पातलो बनाउने औषधीको सेवन तथा हावा सुख्खा भएमा पनि नाकबाट रगत बग्ने गर्छ । सामान्यतया, चिसो मौसममा नाकको माध्यमद्धारा भित्र जाने हावाले नाकभित्र रहेको झिल्लीलाई सुख्खा बनाएमा नाक पोल्न तथा नाकको भित्री भागमा बेस्सरी चिलाउन थाल्छ । जसले गर्दा नाकबाट रगत बग्न थाल्छ । जाडो मौसममा नाकबाट रगत बग्ने समस्या धेरै हुने गर्छ । किनकी चिसोमा चिसो तथा भाइरसका कारण नाक सुख्खा हुने गर्छ ।
सामान्यतया, नाकबाट रगत बग्नुको दुई मुख्य कारण हुन्छ । पहिलो कारणमा एन्टीरियर नोज व्लिडिङ पर्दछ, जसमा नाकको भित्री सतहको रक्त नली फुटेमा नाकबाट रगत निस्कने गर्छ । त्यस्तै, दोश्रोमा पोस्टिरियल नोज व्लिडिङ पर्दछ । नाकको क्यान्सर भएमा वा नाकमा ट्यूमर पलाएमा पोस्टिरियल नोज व्लिडिङ हुन्छ । सामान्यता, नाकमा कयौ प्रकारका ससाना रगत बग्ने नशा हुन्छ । यस्ता नशा संवेदनशील हुनुका साथै पातलो झिलीले ढाकिएको हुन्छ । सनाना घाउ वा चोटले पनि यस्ता झिल्ली फाटेर रगत बग्न सक्छ । त्यसबाहेक, यी समस्या भएमा पनि नाकबाट रगत बग्ने गर्छ । एलर्जी, साइनस सम्बन्धि समस्याका कारण नाक पोलेमा । चिसो वा सुख्खा हावाका कारण । नाक सफा गर्न समस्या भएमा । नाकमा चोठ लागेमा, नाक भाँच्चिएमा वा नाकमा कुनै वस्तु फसेमा । रसायनिक समस्या । नाकमा प्रयोग गरिने स्प्रेको प्रयोग ।
नाकबाट रगत बग्नुअघि टाउको भारी हुन्छ । अचानक टाउको दुख्न थाल्छ । दिमाग घुम्न थाल्ट । कहिलेकाहीँ बेस्सरी चक्कर लाग्छ । त्यसपछि नाकबाट क्रमशः रगत बग्न थाल्छ । रगत कहिले नाकको दायाँ प्वालबाट बग्छ, कहिले बायाँ प्वालबाट बग्छ । कहिलेकाही रगत मुख हुँदैमा पेटमा समेत पुग्छ । जसले गर्दा घोकी लाग्छ । र, साँस लिनमा समस्या हुनसक्छ । कसरी रोक्ने ?ः नाकबाट रगत बग्ने समस्यालाई यी उपायद्धारा रोकथाम गर्न सकिन्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा सुरक्षित ठाँउमा बस्नुपर्छ । अब विस्तारै औलाको सहायताले करिब दश मिनेटका लागि नाकको नरम भागलाई थिच्नुपर्छ । रगत पेटमा नजाओस् भन्नका लागि मुखबाट सास लिनुपर्छ । रगत रोकिएको छ कि छैन भनेर जान्नकै लागि कम्तीमा दश मिनेट प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । नाकमा वरफ लगाएर वा नाकलाई चिसो बनाएर पनि रगतलाई बग्नबाट रोक्न सकिन्छ । तर नाकबाट रगत बग्दा सुत्न भने कदापी हुँदैन । नाकबाट रगत बगेको घण्टौपछि पनि नाक तान्न वा कुनै कुरा सुघ्नबाट बच्नुपर्छ । नाकबाट रगत बग्न कम नभएमा नाकको स्प्रेको प्रयोग गरेर पनि नाक भित्रको ससाना नशालाई टाल्न तथा रक्तश्रावलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, घरलाई चिसो राखेर तथा घरमा हावा छिर्न दिएर पनि लगातार नाकबाट रगत बग्ने समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, चिसो मौसममा नाकलाई सुख्खा हुन नदिन एयर जेलको प्रयोग गरेर पनि यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । नाकबाट लगातार रगत बगेमा के खाने, के नखाने ? नाकबाट लगातार रगत बगेमा गरम मसाला, चिया कफी लगायतका तातो तथा गर्मी गर्ने खानेकुरा खानु हुँदैन । त्यस्तै, मदिराको सेवन गर्नु हुँदैन । शरीरले सहन सक्ने भन्दा बढी चिसो खानेकुरा पनि खानु हुँदैन ।